Nagu saabsan - Xuzhou Troy Import iyo Dhoofinta Co., Ltd.
Troy waa a Dhalada & baakadaha iyo xirnaanshaha qaraabada alaab-qeybiye, degmo ku taal Shiinaha.
WETROYES® ayaa soo saarida dhalada & baakadaha dhalada in ka badan 10 sano. Waxaa jira in ka badan 3,000 dhalo dhalo ah, dhalooyinka quraaradaha ah iyo xirmooyinka laga bixiyo internetka. Waxaan sidoo kale kuu sameyn karnaa adiga, iyada oo aan loo eegin caaryada cusub ama daabacaadda, calaamadaha calaamadaha.
Waxaan higsaneynaa inaan u fududeyno baakadeynta macaamiisheenna.
Waan heli karnaa, qaabayn karnaa, ka soo saari karnaa, ka yeelnaa, ka rarnaa, ka kaydsanaa, iyo inbadan.
- In ka badan 15 warshadood, oo ku yaal Xuzhou, Shandong, Guangzhou, Zhejiang, Anhui ...
- Alaabooyinka keydka ahi waa mid ka mid ah faa'iidooyinkeenna aan laga adkaan karin.
- Muraayadda fasalka cuntada, shahaadada ISO.
Waxaan bixinaa daryeel shaqsiyeed, is qurxin, caddar, cunto iyo cabitaan, baakado dawo ah macaamiisha mug-weyn leh. Waxaan soo saareynaa dhalooyin kala duwan midabkuna wuxuu noqon karaa dhagax madow & mid cad, cagaar & cagaar madow, cagaar iyo buluug. Adeeg dheeraad ah ayaa sidoo kale la heli karaa, sida gogosha, daabacaadda xariirta iyo sidoo kale daabacaadda dhaxan.
Macaamiisha B2C, waxaan u fidinnaa "xirmo" baakado ah dhalooyinka quraaradaha iyo dhalooyinka, taas oo u saamaxaysa ganacsiyada inay ka iibsadaan tiro ka yar Troy Pack marka loo eego kuwa kale ee loo qaybiyo, qiimaha jumlada. Tani waxay ka caawinaysaa ganacsiyada yaryar yareynta kharashaadka iyadoo laga takhalusi doono korka aan loo baahnayn iyo khidmadaha keydinta ee aan loo baahnayn. Isla mar ahaantaana, shirkadaha waaweyn ee ka dalbanaya tirada santuuqa Troy Pack waxay ku raaxaystaan ​​qiimo dhimis wanaagsan.
Xakamaynta tayada waa mid ka mid ah mabaadi'da ugu weyn ee TROY; ahaanshaha mid dhab ah oo masuul ah ayaa aasaasiga u ah helitaanka kalsoonida macaamiisha. Shaqaalaha xirfada leh ee ka socda TROY had iyo jeer waxay raacaan talaabo kasta oo laga soo qaado wax soo saarka ilaa rarka. Troy Pack waxay had iyo jeer qaadan doontaa "istaagid deyn, mas'uuliyad iyo adeeg hufan" siyaasad ahaan, waxayna si adag u shaqeyn doontaa si ay u sameyso xiriiro ganacsi oo xoog leh & kuwa muddada-dheer ah macaamiisha adduunka oo idil.
Alaab Tayo leh oo ay sameeyeen Warshaddo Shahaadaysan
Alaabooyin wanaagsan oo ka socda Shirkadda lagu kalsoon yahay
Wadahadalku waa macalinka ugufiican.
Aasaasihii & Agaasimihii Guud
Kaamilnimada waxaa u sabab ah transcendness joogto ah.
Kusoo dhawow TROY!